Ungakwenza njani ukutya okukutya okuneentlanzi
Kunye nemfuno ekhulayo yeemveliso zasemanzini kunye nokwanda kwengeniso yabantu, Ukulondolozwa kwezilwanyana zaselwandle e-Afrika kuye kwakhula ngokukhawuleza ukusuka ekuqaleni kwenkulungwane. E-Afrika, Indawo yezilwanyana zaselwandle ingahlulwa ibe yeyamanzi amatsha angena emanzini kunye naselunxwemeni lwaselwandle. Umxhesho wokutya weentlanzi zokwenza ukutya zasemanzini kwiAfrikaans yasemanzini amatsha.
Uhlobo olomileyo lokutya okufumaneka kwiintlanzi, ikwabizwa ngokuba kukutya kwentlanzi ngepellet, isetyenziswa ngokubanzi ekuveliseni izixhobo ezahluka-hlukeneyo kwiipellets zamanzi akwiqondo eliphakamileyo lentlanzi, intlanzi yekati, iimbadada, Crab njl. Iipellets zokugqibela zokutya zinesimo esikhethekileyo kunye nencasa elungileyo, ukutya okunesondlo okuphezulu kunye nokwenza izinto ezigudileyo. Ukuzondla ngeentlanzi kunye ne-shrimp, ixesha lokudada kumphezulu wamanzi linokutshintshwa ngohlengahlengiso lwe-extrusion degree xa ukhupha i-pellets. Okwangoku, Ukutya okufunxa okufumaneka entlanzini kuyeyona nto ilungileyo kwifama encinci kunye ephakathi (intlanzi yekati, tilapia, istrimp njl.) ababambi okanye isityalo sokulungiselela ukutya.
Izixhobo eziqhelekileyo zomatshini wokutya iintlanzi zepellet
Ukuqulunqwa kwezixhobo zokunyusa iminwe yecatfish kunye nokutya kwiintlanzi zokutya,Abalobi banokuhlengahlengisa iintlobo ezahlukeneyo zezinto eziluhlaza ngokwentlanzi yabo.